गुणकारी दही यसकारण बन्न सक्छ बिष ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»स्वास्थ्य/जीवनशैली»गुणकारी दही यसकारण बन्न सक्छ बिष !
गुणकारी दही यसकारण बन्न सक्छ बिष !
By रिता घिसिंग on २९ भाद्र २०७५, शुक्रबार १०:२२ स्वास्थ्य/जीवनशैली
एजेन्सी : दही सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा अनेक लाभ मिल्छ । दहीमा भएका रासायनिक पदार्थका कारण यो छिट्टै पच्छ । तर, दही खाने समय र तरिकामा भने ख्याल गर्नुपर्छ । किनभने दही गुणकारी हुँदाहुँदै पनि यसको सेवन गर्ने विधि र समय थाहा नहुँदा यो विषाक्त बन्न पुग्छ ।